Kedu ihe bụ eriri ịsa ahụ kacha mma? - Akụkọ - Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
Na mgbakwunye na isi mmiri ịsa ahụ dị mma n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ, eriri ejikọrọ bụkwa akụkụ dị mkpa. A na-eji eriri igwe anaghị agba nchara, rọba, rọba na ihe ndị ọzọ mee sọks ịsa ahụ a na-ejikarị eme ihe. Igwe mmiri dị mma nwere ogologo ndụ ọrụ na ọ dịghị mkpa ka edochie ya ugboro ugboro. Ya mere, ihe bụ ihe onwunwe nkeeriri mmiri ịsa ahụ?
1. Nkeeriri mmiri ịsa ahụbụ akụkụ na-ejikọta ịsa ahụ na mmiri mmiri. Mmiri na-apụta na ịsa ahụ na-ekpo ọkụ ma ọ bụ oyi, ya mere ihe ndị a chọrọ dị elu. N'ozuzu, eriri ahụ bụ tube dị n'ime na tube dị n'èzí. Ihe dị n'ime tube dị n'ime ka mma EPDM roba, na ihe dị n'èzí bụ 304 igwe anaghị agba nchara. Igwe ịsa ahụ a na-eme n'ụzọ dị otú a ga-abụ nke a ma ama na mmemme dị iche iche, nwee ogologo ndụ ọrụ, na ịsa ahụ
Ahụmahụ ahụ dịkwa mma. Otu na-eguzogide ịka nká na okpomọkụ, nke ọzọ na-agbanwe.
2. Mgbochi ịka nká na nguzogide okpomọkụ dị ịrịba ama. Nke a bụ n'ihi na arụmọrụ nke rọba EPDM a na-eji n'ime tube bụ acid na alkali resistance, okpomọkụ na-eguzogide, nwere ike iguzogide mmiri ọkụ dị elu karịa 100 degrees Celsius, ọ dịghịkwa enwe ike gbasaa na nrụrụ. Nkeeriri mmiri ịsa ahụchọrọ mmiri ọkụ ka ọ na-agafe ogologo oge n'oge ịsa ahụ, ya mere ihe a bụ ihe kacha mma n'ime tube nke dị n'ime.
3. EPDM roba nwere mma elasticity. Ọ na-adịkarị mkpa ịgbatị eriri na ịsa ahụ maka ịsacha nke ọma. Ọ na-eme na ihe nke EPDM rọba nwere mgbanwe ka mma na agaghị enwe nkwarụ site na ịdọrọ ya. Ọ dị mfe ịlaghachi na steeti mbụ ma dị mma maka ịsa ahụ. Nke a bụ otu n'ime ihe mere eji eji roba EPDM eme ihe.
4. Mgbe ịzụrụ aeriri mmiri ịsa ahụ, ị nwere ike buru ụzọ lelee ngbanwe nke eriri ahụ site na ịgbatị. Mgbe a na-agbatị ya, ka mma na-agbanwe, ka mma nke roba ejiri mee ihe. Iji chekwaa nke ọma tube dị n'ime rọba, a na-enwekarị isi nylon nke ejiri acrylic kpuchie rọba.
5. Igwe igwe anaghị agba nchara 304 na-echekwa tube dị n'ime. A na-emepụta ya site na ikuku igwe anaghị agba nchara, nke nwere ike igbochi mgbatị nke tube dị n'ime ma gbochie mgbawa. Iji belata ọnụ ahịa, ụfọdụ ndị na-emepụta ihe na-eji igwe anaghị agba nchara kama igwe anaghị agba nchara. Enwere ike ịgbatị ha n'oge ịzụrụ wee nwalee ka ha hụ ma ha ga-agbake. Ọ bụrụ na ọ bụ igwe anaghị agba nchara, ọ ga-alaghachi n'ọnọdụ mbụ.
Nke gara aga:Ihe na-akpata mmebi nke eriri ịsa ahụ na ụzọ nrụzi
Osote:Ọ nweghị akụkọ